XZ320D tyaba zemiyalelo yokomba rig
I-XZ320D ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo sobunzima esinobukhulu obuphindaphindwayo bokuguqula i-800mm, amandla amakhulu okutsala amandla e-320kN, itorque ye-12000N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-10t.
I-XZ320D i-HDD inesakhiwo esihambelanayo, ukusebenza ngokugqwesileyo, imisebenzi epheleleyo, ulawulo lwe-hydraulic pilot, i-sliding rack kunye ne-pinion, kunye neeparitha zokusebenza eziphambili kunye ne-teknoloji yokulawula ifikelele kwizinga eliphambili lamazwe ngamazwe. Inkqubo ye-hydraulic, inkqubo yamandla, inkqubo yokusebenza kunye nezinto eziphambili zenziwe ngeemveliso zebrendi zodidi lokuqala ezinentsebenzo elungileyo kunye nokuthembeka.
Iimpawu zokwaziswa kweXZ320D HDD
Inkqubo ihlaziyiwe ngokupheleleyo, ulwakhiwo lusebenza kakuhle kwaye lusindisa amandla, isantya sokutyhala sityhala, isantya sokujikeleza sombane esiphakamileyo kunye nesezantsi solawulo lombane, isantya sokubamba isantya siyenyuka, kwaye ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kolwakhiwo kakhulu ziphuculwe.
2.I-rack kunye ne-pinion sliding, ukuqinisekisa uzinzo lwenqwelomoya kunye nokuthembeka kokuqhuba kokuqhuba.
3.The kabini edadayo technology patent yentloko amandla kunye kabini edadayo technology patent le vise unako ukukhusela kakhulu umsonto kumbhobho wokugrumba nokunyusa ubomi inkonzo yombhobho drill.
Isantya esiphezulu sokutyibilika kunye neenkqubo zokujikeleza, ukuguquguquka kwemoto ukufezekisa utshintsho oluphezulu nolusezantsi lokuhambisa, ukwandisa amandla okuziqhelanisa neemeko zokusebenza ngokurhabaxa, ukuphucula ukusebenza kolwakhiwo lokomba.
5.Ukuxhasa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi, umatshini unokunyuswa ngesixhobo esizenzekelayo sokubamba umbhobho, inkqubo yokumisa ngokuzenzekelayo, ukuqala okubandayo, udaka oluqandayo, ukuhlamba udaka, ukudaka udaka kunye nezinye izixhobo.
154/2200 kW / r / min
×73 × 3000
Izinto Ukhetho Qwalasela
Injini Injini ye-QSB5.9-C210 ChinaⅢ ☑
Injini ye-6BTAA5.9-C205 China II □
Ukuqala okubandayo Ukuqala okubandayo ☑
Iankile I-ankile elula ☑
I-ankile eyodwa ezenzekelayo □
I-ankile yesibini ezenzekelayo □
Inkqubo yodaka Ubushushu bodaka □
Ukucoca udaka □
Umncedisi wePipeloader Semi-oluzenzekelayo pipeloader □
Umbhobho opheleleyo ozenzekelayo □
Igama Ukuvelisa umzi-mveliso
Injini I-Dongfeng Cummins
Impompo ephambili Iipermco
Pump Auxiliary Iipermco
I-Rotary Motor / iPush Motor Eaton
Push Motor / Isinciphisi XCMG
XZ320D HDD umatshini uqale xa uhamba noluhlu lokupakisha, kubandakanya la maxwebhu alandelayo:
Isatifikethi seMveliso / Incwadi yemveliso / iinxalenye zeMveliso Atlas / Incwadana yolondolozo lwenjini / incwadana yokunciphisa
Ukusetyenziswa kwempompo yodaka kunye nencwadana yokugcina
Egqithileyo I-XRS8 / 45 yokujikeleza ukujikeleza
Okulandelayo: XZ400 Horizontal Directional Drig Rig
Izixhobo zokugrumba i-Hdd
Horizontal Directional izixhobo zokomba